दुई सन्तान छोडेर अर्कैसँग पोइल, केटा रहेछन् नामूद चोर, केटीको यस्तो भयो हालत! – Sandesh munch
दुई सन्तान छोडेर अर्कैसँग पोइल, केटा रहेछन् नामूद चोर, केटीको यस्तो भयो हालत!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०६, २०७७ समय: १४:१८:२०
एक महिलाको धुमधामसँग विवाह हुन्छ । ती महिलाका पतिको ब्यवसायबारे ती महिला जानकार छिन् । उनले आफ्ना पतिको ब्यवसाय अन्यलाई भने बताएकी छैनन् । उनले यसो गर्नुको एक मात्र कारण पैसा भएको थाहा पाएर तपाई पनि आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ पैसाकालागि भगवान महादेवको पनि तीन नेत्र ब’ल्छ । पैसाकालागि संसारभर ठुला ठुला घटनाहरु हुने गरेका छन् । पैसाको लागि यो दुनिया ब्यग्र जस्तै बनेको छ ।
पैसाकालगि मान्छेले के के गर्छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो पटक स्कटल्याण्डकी एक महिलाले चोरसंग पोइल गएर पुष्टी गरेकी छिन् । स्कटल्याडका एक नामुद चोरलाई हालै ठुलो राशीको चिठ्ठा पर्यो त्यसपछि एक महिला चोरको पछि लागिन् र २ सन्तानकी एक महिला चोरसँग पोइल गएकी हुन् ।
स्कटल्याण्डका नामुद चोर ब्रियनसंग गिलियन बेफोर्डले बिवाह गरेकी हुुन । ती चोरलाई १३ अर्व २२ करोड रुपिया बरावरको चिठ्ठा परेको थियो । ‘द सन’ मा प्रकाशित एउटा रिपोर्ट अनुसार उनीहरु दुवै बिगतका आफ्ना कामको बारेमा कुनै पछुताउ नभएको बताएका छन् ।
दुई सन्तानकी आमा गिलियनले नयाँ पतिको छविबारे आफुलाई सबै जानकारीमा भएको र त्यो कुराले आफुलाई दुःखी नबनाएको बताएकी छिन् । आफूले मान्छे भन्दा बढि पैसा हेरेको उनको भनाई छ ।’ सांकेतिक तस्वीर
१८६ पटक हेरिएको